July 8, 2019 - POPPIN NEW
ပြည်သူတွေကိုလဲ အပ်ပါတယ်။ ကျမကလေးတွေဘက်က မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်း ကလေးသူငယ်အနေနဲ့ ပြန်လည်ရပ်တည်ပေးပါလို့ ကျမ အနူးအညွတ် တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်”
“ကျမကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ မိဘတစ်ယောက်အနေနဲ့ တအားခံစားရပါတယ်။ ပြည်သူကိုလည်း ကျမအပ်ပါတယ်။ ကျမ ကလေးတွေကို မှန်ကန်တဲ့ DNA စစ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျမခွင့်ပြုပါတယ်။ ကျမကလေးတွေဘက်ကနေ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်း အမှန်တရားကို ပြန်လည် ရပ်တည်ပေးစေချင်ပါတယ် ကျွန်မရဲ့ အုပ်ထိန်းမှုအောက်မှာ ဗစ်တိုးရီးယားလေးအခုလိုဖြစ်သွားတဲ့တွက်လည်း ကျမ မိသားစုနဲ့ ထပ်တူ ၀မ်းနည်းပါတယ်။ ထပ်တူလဲ ခံစားရပါတယ်။ ကိုယ့်ကလေးတွေအတွက်လည်း အရမ်းခံစားရပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာအခု ကလေးတွေနဲ့ …
လူစားထိုးခံရမှုဟု ယုံကြည်​ရ​သော wisdom hill သက်​ငယ်​မုဒိန်းမှုအတွက်​ သမ္မတထံတင်​ပြရန်​ အချက်​အလက်​ 75% ရှိ​နေဟုဆို …..
လူစားထိုးခံရမှုဟု ယုံကြည်​ရ​သော wisdom hill သက်​ငယ်​မုဒိန်းမှုအတွက်​ သမ္မတထံတင်​ပြရန်​ အချက်​အလက်​ 75% ရှိ​နေဟုဆို ….. ဆိုင်ဘာရဲကအစ (ယာဉ်မောင်း) လို့ တလုံးထဲ တင်လိုက်တဲ့အတွက် ဖယ်ရီမောင်းတဲ့သူလိုလို အများက ထင်သွားတယ်။ သတင်းဌာနတွေက ကိုးကားကြတယ်။ ဖယ်ရီပေါ်မှာ ဖြစ်သလိုလို ထင်ကုန်တယ် တကယ်တော့ အောင်ကြီးဟာ ဖယ်ရီယာဉ်မောင်း မဟုတ်ပါ။ ၁၅ ရက်နေ့ကမှ …
အိပ်ပျော်နေရာမှ ရုပ်တရက်ထလိုက်ခြင်း၏ ကြောက်မက်ဖွယ်ဆိုးကျိုး
အိပ်ပျော်နေပြီးမှ ရုတ်တရက် ထလိုက်ခြင်းဟာ လူကိုသေစေနိုင်တယ်ဆိုတာ (အိပ်ယာအထမှာလိုက်နာစရာ) အိပ်နေရင်းဘာလို့ သေကြတာလဲ? အားလုံး အတွက်​ အ​ရေးကြီးလို့ မိတ်​​ဆွေ ဆရာဝန်​တစ်​​ယောက်​ ​ပြောပြထားတဲ့ ​ဟောဒီအချက်​​လေးကို သတိထားကြဖို့ မျှဝေပါရ​စေ။ ည ည အိပ်​​ပျော်​ ​နေရာက ဆီးသွားချင်စိတ်ကြောင့်​ နိုးလို့ ဘဲဖြစ်​ဖြစ်​ နံနက်​​စော​စော အိပ်​ရာ အထမှာ ဖြစ်​ဖြစ်​ လူတိုင်း မိနစ်​ဝက်​ …
လူတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက် မသိဘဲပေါင်းသင်းဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူပါဘူး။တကယ်လို့ နှစ်အကြာကြီးပေါင်းခဲ့တယ်ဆိုရင် စကားများ ၊ ရန်မဖြစ်ဘူးတဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဟာအတော်နည်းပါလိမ့်မယ်။ မကြာသေးမီ ကလုပ်ထားတဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုအရဆိုရင် လက်ထပ်ပြီးသားစုံတွဲ ၄၄ရာခိုင်နှုန်းဟာ တပတ်မှာ အနည်းဆုံးတစ်ခေါက်လောက်တော့ စကားများရန်ဖြစ်ကြခြင်းဟာ သူတို့ရဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုရေရှည်ခိုင်ခံ့စေတယ်လို့ ယုံကြည်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဘယ်လိုအချက်တွေပိုပြီးကောင်းမွန်စေတဲ့ဆက်ဆံတစ်ခုအဖြစ်တည်ဆောက်နိုင်မှာလည်းဆိုတာကို ပြောချင်လွန်းလို့ပရိသတ်ကြီးသိအောင်ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ၁။ ရန်ဖြစ်ခြင်းက သင့်ချစ်သူအပေါ်ငြီးငွေ့နေခြင်းကနေကာကွယ်ပေးပါတယ်သင်တို့သာနှစ်အနည်းကြာထိတွဲလာခဲ့တယ်ဆိုရင် ဒီအချက်ကိုသဘောတူလိမ့်မယ်မထင်ပါဘူး ။ ဒါက သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးပါ။သင့်ချစ်သူနဲ့သင်သာအရာအားလုံးစိတ်တူကိုယ်တူဖြစ်နေရတာကဘယ်လောက်ပျင်းဖို့ကောင်းလဲလို့စိတ်ကူးကြည့်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်လို့လည်း လန့်မသွားပါနဲ့။ …
တစ်လအတွင်းမှာ တင်ပါးလေးကို လုံးဝန်းကျစ်လစ်သွားစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း (၅)မျိုး
ပျိုမေတို့ တင်ပါးလေးတွေ လှဖို့ ထိုင်ထလေ့ကျင့်ခန်းတစ်မျိုးပဲ လုပ်လို့ရတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့နော်။ ထိုင်ထလုပ်ရတာ မကြိုက်တဲ့သူလေးတွေအတွက် တင်ပါးလေးတွေ လုံးဝန်းကျစ်လစ်လှပဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းလွယ်လွယ်လေးတွေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် လေ့ကျင့်ခန်း (၁) ပုံထဲကလို လက်ဝါး၊ ဒူးနဲ့ ခြေဖမိုးတွေ ကြမ်းပြင်မှာ ထိထားတဲ့ပုံစံမျိုးနေပါ။ ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို ဘေးဘက်ကို ဆန့်တန်းလိုက်ပြီး နဂိုပုံစံအတိုင်းနေပါ။ အဲ့ဒါကို ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို (၁၀)ခေါက်စီ လုပ်ပေးရုံနဲ့ တင်ပါးဘေးဘက်မှာ …
မင်းတို့တတွေ..အိုမင်းရောက်လာ ကြုံသည်အခါ အမေ့လို အဖြစ် အမှိုက်တခုလို စွန့်ပစ်ခြင်းမှ ဝေးကွာနိုင်ကြပါစေ..
တချိန်က.. ချီးသေးသုတ်သင် အပုတ်မစင်တွေကြားမှာ မရွံမရှာ.. ပြုစုမှုအခါခါ နဲ့ နွေးထွေးမှု အကြင်နာတွေ.. ပေးခဲ့တဲ့ အမေ.. မင်းတို့တတွေ အလှည့်မှာ ငဲ့ညှာ ထောက်ထားစာနာ မသနားပဲ အမှိုက်တခုလို စွန့်ပစ် ရက်စက်လိုက်ပါဘိ.. အရိုးနွဲ့လို့ ခွေယိုင် မကြံ့ခိုင်.. မရပ်နိုင်တော့တဲ့ ခန္ဓာ စွန့်ပစ်ရက်ပါဘိကွာ.. ချီးသေးသုတ်သင် အပုတ်မစင် ကို မင်းတို့ မလုပ်ချင်တော့လို့ …
၁။ သင့်ကို ဂရုမစိုက်တဲ့သူတွေကို သင်ဂရုစိုက်စရာ မလိုပါဘူး။ တစ်ချို့လူတွေက .. သူတုိ့ကို ဂရုစိုက်လေလေ၊ သင့်ကို ပစ်ထားလေလေပါပဲ။ ဒီတော့ … သူတို့ကို လိုက်ဂရုစိုက်နေမှာထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုဂရုစိုက်ပါ။ ၂။ လူ့ခွစာများကို ဝေးဝေးက ရှောင်ပါ။ တစ်ချို့လူတွေက .. အခြားသူ ဘာလုပ်လုပ် အမြဲအပြစ်ပြောနေတတ်တယ်။ ဘုကလန့်တိုက်တတ်တယ်။ ဂျစ်ကန်ကန်နဲ့ စိတ်ထဲရှိ …
ဆရာမနှင်းနုလိုပဲ အမှန်တရားကို အကုန်သိတယ်ဆိုပီးဖြစ်စဉ်အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ သူတစ်ယောက်
မပြောဘူး နေနေတာ ပြောလိုက်ဦးမယ် victoria လေးအတွက် ဒီမယ် ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးပညာ ရှင်တို့ ၂ ယောက်ပေါင်းပီး ဘယ်လိုပဲလိမ်လိမ် ကျမသိတာလေးတော့ ပြောပြလိုက်ဦးမယ် (ရှင်တို့ မထင်မှတ်တာနဲ့ ထည့်မတွက်မိတာလေးပေါ့) မနက် ကျောင်းကားဖယ်ရီလေးလာတယ် Victoria လေးလဲပါလာတယ် ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင် သားအငယ်ကောင်လဲ ပါလာတယ် ကျောင်းရောက်တယ် ကလေးတေဆင်းတယ် ဟို သတောင်းစားလေးက Victoria …
Wisdom Hill မူကြို​ကျောင်း သက်​ငယ်​မုဒိန်းမှုရဲ့ အဓိကသက်​​သေ ဆရာမနှင်းနု ​ပျောက်​ဆုံး​နေ …..
Wisdom Hill မူကြို​ကျောင်း သက်​ငယ်​မုဒိန်းမှုရဲ့ အဓိကသက်​​သေ ဆရာမနှင်းနု ​ပျောက်​ဆုံး​နေ ….. Wisdom hill က​လေးမူကြို​ကျောင်းမှာ ဖြစ်​ခဲ့တဲ့ သက်​ငယ်​မုဒိန်းမှုရဲ့ အဓိက မျက်​မြင်​သက်​​သေဟု ယူဆဏ​သော ဆရာမ​လေး နှင်းနု ​ပျောက်​ဆုံး​နေတယ်​လို့ tomorrow သတင်းဂျာနယ်​မှာ ​ဖော်​ပြထားပါတယ်​။ အဆိုပါ နှင်းနုဆိုတဲ့ ဆရာမနဲ့ ဂျူလိုင်​လ ၆ရက်​​နေ့က BBC သတင်းဌာနနဲ့ …
သင်းသင်းရဲ့ နာမည်တပ်ပြီး ပြောခြင်းခံရတာကို ပညားပါပါ တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ မို့မို့မြင့်အောင်….
တစ်ခေတ်တစ်ခါက လျှမ်းလျှမ်းတောက်အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့ပြီး အခုအချိန်အထိ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးလကွံမှုတွေကို ရရှိထားနေဆဲဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီများရှင် နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးကြီး မို့မို့မြင့်အောင်ကတော့ နာမည်တပ်ပြီးတော့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ဝါးလုံးရှည်နဲ့ ပတ်မရမ်းဖို့ ပြောခံထားရတာကို Cele yatkwat ရဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ပြန်လည် တုံ့ပြန်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါအပြင့် မိုးအောင်ရင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း အောင်မြင်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ မိုးအောင်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မို့မို့မြင့်အောင်က “သူအောင်မြင်ပါစေပဲ ဆုတောင်းရမှာပဲ ဘာလို့လဲဆိုတော့ …